Fepetra fampiasana - blackjack77madagascar.com
Tena	/ Fepetra
blackjack77madagascar.com (Site) tsy ampy ny rehetra ny mpampiasa. Ny vaovao, antontan-taratasy, andinin-tsoratra masina sy ny rindrambaiko (Fitaovana) sy ny tolotra omena eto dia manaiky hozakain'izy manaraka ireto fepetram-pampiasana. Raha toa ny mpampiasa dia ambanin'ny 21, dia tsy maintsy namaky ity taratasy teo anatrehan'ny ray aman-dreny na ny mpiambina ara-dalàna. Tokony ny mpampiasa na ny mpampiasa ny ray aman-dreny / mpiambina ara-dalàna tsy manaiky manaraka ireto sy ny fanao, dia tokony mampiasa ny Site intsony manomboka izao. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny Site na ny fitaovana na ny Services, ianao miombon-kevitra avy hatrany ny fepetram-pampiasana. blackjack77madagascar.com tahirin ny zo hiova sy hanova ny fepetram-pampiasana ho amin'ny fisainana mazava ny hany. Raha mbola mampiasa ny Site rehefa misy fiovana ny fepetram-fampiasana izany dia heverina ho milaza anao hanaiky ny fiovana rehetra. Ankoatra izany, misy fampiasana ny fitaovana, azo ampiharina ny sasany fitsipika manokana, dia manaiky ny fepetra fanampiny ho an 'ireo voalaza eto, ao amin'ny fepetram-pampiasana. Rehetra sy ny fanampiny fanampiny fepetra dia ho voakambana amin'ny alalan'ny boky ho any amin'ny manaraka fepetram-pampiasana. Tapaka na ireo fepetram-pampiasana dia hitarika ho mandeha ho azy fampitsaharana ny fanomezan-dàlana sy ny fahafahana hahazo ny Site, ary ny mpampiasa dia tsy maintsy handringana izay alaina na vita pirinty Fitaovana avy amin'ny Site.
Ny Marks (izay ahitana Logos, marika famantarana sy ny asa fanompoana) hita ao amin'ny Site dia fananan 'blackjack77madagascar.com na antoko fahatelo. Izay mety ho fampiasana ny Marks nanana ny Site ny hafa antoko fahatelo dia voarara. Fitaovana sy ny Services ny blackjack77madagascar.com dia voaaron'ny zon'ny mpamorona sy ny hafa lalàna momba ny fananana ara-tsaina, noho izany misy tsy nahazoan-dalana ny fampiasana azy dia heverina ho toy ny fanitsakitsahana ny lalàna toy izany. blackjack77madagascar.com mpampiasa dia tsy manana na maneho na zo Te hilaza na inona na inona Patents, zon'ny mpamorona, famantarana na varotra miafina Info momba ny Fitaovana na / sy Services. Izay mety ho fampiasana (oh indray soratra, maka tahaka sy nandika) ny fanazavana hita ao amin'ny Site (oh antontan-taratasy sy ny sary) tsy misy voasoratra fahazoan-dalana avy amin'ny Site dia voarara. Izay mety ho ny furnishing ny fanazavana eo ambany no tsy Grant na miantoka misy fahazoan-dalana na inona na inona na Patents zon'ny mpamorona.
Fandefasana misy fitaovana, vaovao, teknika, hevitra na hevitra (Feedbacks) ny Site, ny mpampiasa dia manaiky sy manaiky fa:
feedbacks tsy ahitana na format manan-tompo sy ny vaovao tsiambaratelo;
blackjack77madagascar.com no tsy finiavana na manao ny adidy na inona na inona ny Express na Te hilaza tsiambaratelo momba ny Feedbacks;
ny blackjack77madagascar.com ankehitriny sy ho mendrika ny hahazo mampiasa na manambara izay Feedback na inona na inona antony iray fisainana mazava tokana maneran-tany;
ny Feedbacks lasa ny tany momba ny blackjack77madagascar.com, tsy maintsy misy hatsaram-panahy amin'ny mpampiasa;
blackjack77madagascar.com tsy manome onitra na fanonerana na inona na inona.
Fiantohana SY Fampitandremana
NY SITE TENA REHETRA NY KOJAKOJA SY SAMPAN-DRAHARAHA "araka ny". BLACKJACKDOC.COM mandà REHETRA naneho OR Te hilaza fiantohana anisan'izany fa tsy voafetra ho fiantohana Te hilaza NY MERCHANTABILITY SY NY Fitness HO ZAVA-KENDREN'NY iray manokana, ny tena halehiben'ny TO navela BY ampiharina LALÀNA. BLACKJACKDOC.COM azo avela ary tsy manome antoka fa na ny SITE; Na CONTENT, KOJAKOJA, vaovao, VOKATRA (anisan'izany ny rindrambaiko) sy / na SAMPAN-DRAHARAHA natao ho anareo ON na amin'ny alalan'ny NY SITE; LOHAMILINA; Na amin'ny alalan'ny E-mail voaray avy BLACKJACKDOC.COM Afaka AVY virosy sy / na HARMFULL Components BLACKJACKDOC.COM mihazona andraikitra NO MISY fahavoazana izay mety mitsangàna amin'ny fampiasana ny SITE OR na votoaty, vaovao, KOJAKOJA, ENTANA (anisan'izany Software) sy / na SAMPAN-DRAHARAHA natao ho anareo ON na amin'ny alalan'ny NY SITE, ao anatin'izany, fa tsy voafetra ho mpitranga, hanasazy, mivantana, tsy mivantana, na aoriana fahasimbana, anisan'izany fa tsy voafetra ho ny fahavoazana izay mety hiteraka fatiantoka ny antonta-kevitra OR tombony, AZA Nampitandrina ny mety toy izany fahavoazana. Mpampiasa mazava mahatakatra sy manaiky fa ny fampiasana ny SITE ITY NO ATAHORANA Ny hany AT.
Any anisan'izany ny fahadisoana ara-teknika na ny hafa, na ny inaccuracies typographical diso dia azo atao. blackjack77madagascar.com zo hanao fanovana ireo fotoam-pivavahana sy amin'ny Site Fitaovana na oviana na oviana tsy misy filazana.
Ny fitaovana sy / na Services ao amin'ny Site mety ho avy ny daty, ary tsy misy mahatonga blackjack77madagascar.com fanoloran-tena na inona na inona ny vaovao farany fitaovana toy izany na ny asa.
Ny rohy rehetra ny antoko fahatelo toerana tsy ao amin'ny fanaraha-maso na ny andraikitry ny blackjack77madagascar.com.
blackjack77madagascar.com mahatonga tsy fanehoana na inona na inona amin'ny hafa Website izay mety misafidy ny hanana fahafahana miditra ka mifandray amin'ny alalan'ny Site ity. Ny rohy ao amin'ny Site ity dia nanome fotsiny tahaka ny tsy hanahirana, ary blackjack77madagascar.com tsy mihazona na mampirisika ny olona hanaraka na hanaiky izay andraikitra toy izany ny votoatin'ny Websites.
Users Manaiky ny indemnify sy mihazona blackjack77madagascar.com sy izay rehetra azy ny tompony, sampan'ny orinasa, mpiray, mpiara-branders, mpiasa na ny hafa mpiara-miasa, ary ny mpiara-miasa tsiny avy amin'ny madio, very, milaza na ny tinady, anisan'izany ny mpisolovava ny antonony 'saram, atao amin'ny rehetra fahatelo antoko noho ny na ny fampitahorana miseho avy amin'ny votoaty mpampiasa manaiky, lahatsoratra na mamindra amin'ny alalan'ny Site (anisan'izany fa tsy voafetra ho misy User Content), ny fampiasana ny Site, ny fifandraisana amin'ny Site, ny fandikana ny Fepetra fampiasana, na ny fandikana ny hafa ny olona na fikambanana ara-dalàna ny zo.